Sonos Roam, falanqaynta qiimaha iyo astaamaha | War gadget
Sonos Roam, yar laakiin aad u kulul [DIB U EEGID]
Miguel Hernández | 06/04/2021 15:00 | General, Reviews
Waxaa jira siyaabo kaladuwan oo codad ah oo soo baxaya, qaasatan markaan kahadalno dhaqdhaqaaqa, oo waligood dhib malahan inaad kudagto barkadda ama aad uxirto barbecue afkeena caqliga badan ugana faa'iideysto si aan u noolaano galabkeena sida ugu badan suurtagal ah Sonos wuxuu xusay guusha Dhaqdhaqaaqa oo wuxuu rabay inuu ka dhigo mid yar oo soo jiidasho leh.
Nagala soo bax dhammaan astaamaheeda iyo sababta Sonos uu hadda u sheegto carshiga ku hadlayaasha la qaadi karo.
Sida munaasabado kale oo badan, waxaan go'aansanay inaan raacno dib-u-eegidgan oo fiidiyoow ah kanaalkayaga YouTube-ka oo aad ku arki karto wada-hadallada dhammaystiran, tallaabooyinka dejinta iyo astaamo kale oo qabow sida tijaabooyinka codka. Waxaan kugula talineynaa inaad soo mariso kanaalkayaga oo aad ka faa'iideysato fursadda aad kaga mid noqonaysid bulshada Actualidad Gadget, markaa kaliya ayaan sii wadi karnaa inaan kuu soo gudbino waxyaabaha ugu fiican ugana caawin karno go'aannadaada. Xusuusnow in sanduuqa faallooyinka uu qaban karo dhammaan su'aalahaaga, si xor ah u isticmaal. Ma ka heshay? Waxaad ka iibsan kartaa Sonos Roam at CADADKA.
1 Qalabka iyo naqshadeynta: Lagu sameeyay Sonos
3 Otomaatiga TruePlay iyo Sonos Swap
4 Is-maamul iyo tayada maqalka
Qalabka iyo naqshadeynta: Lagu sameeyay Sonos
Shirkada Waqooyiga Ameerika waxay awood u leedahay inay dhisto qalab wata aqoonsi u gaar ah, waxayna sameysay sanado badan. Xaaladdan oo kale, Sonos Roam ayaa si lama huraan ah noo na xusuusinaysa badeecad sumadeed kale, Sonos Arc. in aan dhowaan falanqeynay. Waana in runta la sheego, waxay la mid tahay nuqul yar oo nashqaddan ah oo soo jiidasho leh iyo in bogaadin badan ay u adeegeen shirkadda. Waxay leedahay cabbir dhexdhexaad ah iyo astaamaha u gaarka ah, oo leh jidh u gaar ah oo gebi ahaanba ka takhalusi kara naylka si loo siiyo iska caabin ballaaran. Waxaan mar labaad dooranay laba midab, caddaan iyo madow oo leh dhammaystir maati ah.
Cabirrada: 168 × 62 × 60 mm
Miisaanka: Gram 460
Sida iska cad maahan aalad iftiin ah, laakiin waa in uusan jirin qof ku hadla is ixtiraamaya oo yeelan doona miisaan fudud, tan alaabooyinka dhawaqa ah fudeydka xad dhaafka ah waxaa badanaa loola jeedaa tayada maqalka oo liita. Tani kuma dhacdo Sonos Roam, oo waliba ay ku jiraan shahaadada IP67, waa biyuhu, Boorka u adkaysta oo lagu qari karaa biyo qoto dheer hal mitir illaa 30 daqiiqo iyadoo kuxiran nooca. Kuma hubin shuruudahaan sababo muuqda awgood, laakiin ugu yaraan kan Sonos Move ayaa noo cadeeyay.
Sida ay u dhacdo munaasabadaha kale, Sonos waxay soo saarta badeecad si muuqata loogu talagalay in loo isticmaalo Wifi, sidaa darteed waxaa ku jira kaarka shabakad ee ku habboon router kasta 802.11 b / g / n / ac 2,4 ama 5 GHz iyadoo awood u leh inuu u ciyaaro silig la’aan. Tani waa mid xiiso leh in lala jaanqaado shabakadaha 5 GHz, waxaan ognahay inaysan ku hadlin dad badan oo hadlaya, Sonos Roamkan kama dhinna. Si kastaba ha noqotee, waa in aan iloobin in Sonos uu yahay kombiyuutar yar oo qaab sameeye ah, qalbigiisa ayuu ku qariyaa a 1,4 GHz afar geesle processor leh A-53 naqshadaha taasi waxay isticmaashaa xusuusta 1GB SDRAM iyo 4GB NV.
Iswaafajinta Hoyga Google
Iswaafajinta Amazon Alexa
Iswaafajinta Apple HomeKit
Waxaas oo dhan ayaa ka dhigaya Sonos meeraysto qalab madax banaan oo isna markiisa leh Bluetooth 5.0 daqiiqadahaas naga fogeeya guriga, iyo waxa Sonos Roam-ka si qumman loogu talagalay. Marka taa laga reebo, waxaan sidoo kale yeelan doonnaa Apple AirPlay 2 taas oo ka dhigaysa mid si buuxda ula jaanqaadaysa qalabka shirkadda Cupertino iyo Apple HomeKit markay tahay abuurista dhacdooyinka qolka badan sida ugu fudud. Waxaas oo dhami waxay noo ogolaanayaan inaan ku raaxaysanno Spotify Ku Xidhnow, Apple Music, Deezer, iyo wax badan oo dheeri ah.
Otomaatiga TruePlay iyo Sonos Swap
Qiimaha dheeriga ah ee Sonos Roam ma aha oo kaliya waxyaabaha aan soo sheegnay, in kastoo ay umuuqato inay is burinayaan maxaa yeelay waa Sonos ugu raqiisan suuqa, waxaan helnaa laba software iyo astaamo qalab oo xilligan Sonos laguma darin inta kale ee ku hadla caqliga. . Waxaan ku bilaabaynaa Sonos Swap: Marka lagu xidho Wi-Fi iyo badhanka ciyaarta / hakadka ee Roam ayaa la riixay oo la qabtay, afhayeenku wuxuu u calaamadeyn doonaa dadka kale ee ku hadla Sonos ee shabakadaada si ay u sii daayaan dhawaaqa soo noqnoqda ee ultrasonic. Muusikada waxaa laga wareejin doonaa Sonos Roam oo waxaa loo wareejin doonaa afhayeenka ugu dhow ilbiriqsiyo gudahood.
Waxaan hadda ka hadleynaa Automatic TruePlayInbadan oo idinka mid ah waad ogtahay in TruePlay uu yahay nidaamka gorfaynta deegaanka ee qalabka Sonos oo noo ogolaanaya inaan helno codka ugu fiican daqiiqad kasta. Hadda waan hawlgelin karnaa hawl otomaatig ah oo noo dammaanad qaadaysa in Sonos TruePlay ay si joogto ah u shaqeyneyso si ay noo siiso codka ugu fiican xitaa marka aan ku xirnahay Bluetooth, wax gaar ah xilligan Sonos Roam.
Is-maamul iyo tayada maqalka
Waxaan hadda aadeynaa durbaannada, iyada oo aan lagu qeexin mAh waxaan leenahay dekedda 15W USB-C (adabtarada kuma jiraan) iyo taageero lacag la'aan wireless Qi, oo xeedho keeda waa inaan si gooni ah ugu iibsanaa 49 euro. Sonos wuxuu noo balan qaadayaa 10 saacadood oo dib loo maqal ah, taas oo tijaabooyinkeena lagu guuleystay qiyaastii illaa iyo inta aan heysanno kaaliyaha codka oo kala go'ay oo mugga uu ka badan yahay 70%. Si loo soo dalaco waxaan qaadan doonaa in yar oo saacad ah iyada oo loo marayo dekedda USB-C, ma aanan awoodin inaan tijaabino qiijiyaha Qi.
Dual Class H kordhiyo
Midrange ku hadla
Marka laga hadlayo tayada codka, Haddii aan isbarbar dhig ku samayno inta ka hartay alaabooyinka ku jira noocyadeeda, sida Ultimate Ears Boom 3 ama ku hadalka JBL, waxaan ka helnaa wax soo saar si cad u sarreeya. Haa Waayahay waxaan leenahay xoogaa buuq ka sarreeya 85%, Waxay umuuqataa lama huraan sababtoo ah cabirka sheyga, si la mid ah tayada ay aad u sareyso, gunta hoose ayaa si gaar ah loo muujiyey. Waxaan la yaabay awoodda weyn ee qalabka, kala duwanaanshaha makarafoonkiisa isku dhafan. Waxaas oo dhami waxay ka dhigayaan kan ugu awoodda badan uguna tayada sarreeya afhayeenka la qaadan karo ee suuqa yaalla € 179., oo si la yaab leh uma doodayso qiimo ka badan marka loo eego tartanka.
Ku dhejiyay: 6 April 2021
Wax ka badalidii ugu dambeysay: 3 April 2021
Isku xirnaansho aan horay loo maqal oo ku hadla af is haysta
Sonos tayo wanaagsan iyo awood
Spotify Connect iyo inta kale ee faa'iidooyinka Sonos S2
Alexa, Google Home, iyo iswaafajinta AirPlay 2
Miisaanku waa mid xad dhaaf ah
Kuma jiraan adapter ada
Kuma jiraan Qi xeedho
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Sonos Roam, yar laakiin aad u kulul [DIB U EEGID]
Ciyaaraha chess ee ugufiican PC
TCL TS6110, waa hab raqiis ah oo lagu dhiso tiyaatar guri oo leh Dolby Audio